बम पड्काएर परिवर्तन आउँदैन [सन्दर्भ: काठमाडौँमा बम विस्फोट]
Aakar February 27, 2012
केही हप्ता र महिना भएको थियो, पड्किएको, पड्काइएको खबर नसुनिएको तर आज फेरि एउटा दुखद घटना घट्यो ! पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मुल्यवृद्दिको बाहना देखाएर संयुक्त जातिय मोर्चाले केही निर्दोष व्यक्तिहरुको अनाहकमा ज्यान लिए ! जुनसुकै बाहनामा पड्काइएको भएपनि, यो अत्यन्तै निन्दनिय काम हो, यसै ब्लगमार्फत त्यस्तो जघन्य अपराधको घोर भत्सर्ना गर्दछौँ ! एकपटक मात्र पाइने मान्छेको जिवन सस्तो छैन, मान्छे जिवनको अगाडि त्यो पेट्रोलको मुल्य के नै छ र? तर होइन उनीहरुले पेट्रोल महंगो र मान्छेको जिवन सस्तो देखे ! मान्छे मारेर, कुनै क्रान्ति हुँदैन, कुनै विरोध हुँदैन, कुनै आन्दोलन हुँदैन, सहरमा बम र बारुद पड्काएर, मान्छे मारेर क्रान्ति गरेँ भन्नु मुर्खता मात्र हो ! सहरको बिचमा बम पड्काएर, मान्छेको जिवन हरेर, सान सँग आफूले पड्काएँ भन्छन् तर सोच्दैनन्, जो मारिए तिनका आफन्तलाई कति पिडा भएको होला ! जो मारिए, उनीहरु गइगए ! न उनीहरुलाई अब कुनै पिडा हुन्छ, न कुनै किसिमको दुख वा अभाव नै हुन्छ ! जति पिडा हुन्छ बाँच्नेलाई हुन्छ ! मान्छेका कति सपना अनि आशाहरु हुन्छन्, के सोचेर जिवनमा अघि बढिरहेकोहुन्छ तर अनाहकमा ज
"एक्लै एक्लै, कतातिर लाग्यौ?" नेपथ्यको एउटा बहुचर्चित गीत 'हिमाल चुचुरे'को यो टुक्रा प्रश्नलाई मेरो उत्तर थियो - नेपालगन्ज। 'छेक्यो छेक्यो', 'रेशम', 'यो जिन्दगानी' जस्ता निकै चलेका गीतहरु पस्केर लगभग दुई दशक अघिदेखि हाम्रो मनमा बसेको छ, नेपथ्य। यो ब्याण्डले 'शान्तिका लागि शिक्षा' भन्ने नाराका साथ देशका विभिन्न ठाँउहरुमा लाइभ कन्सर्ट गर्दैछ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै खुशी लागेको थियो। तर त्यसमा आफ्नो ठाँउ 'नारायणगढ' नदेखेपछि भने मन खिन्न भयो। तैपनि 'मै नाचे छमछम', 'तालको पानी', 'स-कर्णाली' जस्ता गीतहरु अमृत गुरुङको स्वरमा प्रत्यक्ष सुन्ने र गीतको तालसँगै झुम्ने मौका भने खोजीरहेको थिएँ म। मलाई नेपथ्यका केही कुराहरु असाध्यै मन पर्छन् । एउटा हो, यसका गीतहरुमा नेपालीपनाको मिठास सधैं पाइन्छ। नेपालका कुनाकुनाका माटोबाट यसका गीतहरु जन्मेका छन्, यसका गीतहरुमा नेपालीका जीवनहरुका पीडा, माया, दु:खको रस घुलेको पाइन्छ। 'लोक रक'लाई आफ्नो मुलधार मान्ने यो ब्याण्डले नयाँ पुस्तालाई मनपर्ने शैलीमा गाँउगाँउका लो
के स्क्र्याच कार्डले क्यान्सर हुन्छ? [समाचार टिप्पणी]
सुरु मै प्रस्ट पारौँ, म ‘मेडिकल’ क्षेत्रसँग सम्बन्धित छैन तर पनि ब्लग भने स्क्र्याच कार्ड र क्यान्सर बारे लेख्दैछु ! केही दिन अघिको कान्तिपुर मा छापिएको खबर यस्तो छ: मोबाइल रिचार्ज गर्न लागि हामी स्क्रयाच कार्ड उपयोग गर्छौं । एटिएमको पासवर्डको लागि समेत यस्तै उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तर ध्यान राख्नोस्, त्यस्तो बेला औंलाले स्क्रयाच नगर्नु नै राम्रो । वैज्ञानिकहरूको अनुसार त्यस्तो औंलाले शरीरमा छुँदा क्यान्सरको खतरा हुन्छ । मेडिकल रिसर्च अथोरिटी अफ अमेरिकाले हालै स्क्रयाच कार्डका विषयमा गरेको अनुसन्धानपछि यो तथ्य अगाडि आएको हो । अध्ययनअनुसार स्क्रयाच कार्डमा 'सिल्भर नाइट्रोअक्साइड' हुन्छ । नङको माध्यमले त्यो शरीरमा पुग्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । यो अक्साइडले छालाको क्यान्सरलाई निम्त्याउँछ । नाइटि्रक अक्साइडले शरीरमा बिस्तारै बिस्तारै नोक्सान पुर्‍याउन थाल्छ । टाउको दुखाइ, बान्ता र कमजोरीको रूपमा यसको असर देखिन्छ । मुटुको चाल असामान्य हुने, छाला चिलाउने, मुख सुक्ने, शरीरमा पानीको कमी हुने जस्ता समस्या पनि देखिन थाल्छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई सास फेर्नसमेत असजिलो भएको पाइयो । शरीरमा न
प्राय: सँधैजसो साथीहरुबाट सुनिने कुरा भनेको, ‘त्यसले दु:ख परेको कुरालाई नि लाइक गर्यो’ ! उता बस दूर्घटनामा दर्जनौँ मान्छे मरेको खबर छ, त्यो कुरा नि लाइक गरेछ, कस्तो ‘सेन्स’ नै नभएको मान्छे रै’छ ! मान्छेहरु के भा’का हुन्, जे कुरा नि लाइक गर्छन् ! अब फलानाको निधन भो भनेर, फेसबुक स्टाटस लेख्यो, मान्छेहरु त्यो पनि लाइक गर्छन् ! हैन, साँच्चै मान्छेहरुको सेन्स नै छैन कि क्या हो? मान्छेहरुले मानवियता र नैतिकता नै बिर्से कि कसो भनेर, ती मान्छेहरु माथि अरुहरुले नैतिकताको प्रश्न नै उठाउँछन् । फेसबुक लाइकको सम्बन्धमा धेरै साथीहरुबाट यस्तै यस्तै किसिमका कुराहरु सुन्न पाइन्छ ! हो पनि, दुख परेको खबर फेसबुकमा स्टाटसको रुपमा अपडेट गरेकोछ, त्यो कुरालाई पनि लाइक गरेको देख्दा अचम्म त लाग्ने नै भयो ! जहिँकहिँ यसप्रकारको कुराहरु भएको देख्छु, अनि फेसबुक लाइकको बारेमा सोच्न बाध्य हुन्छु ! प्राय: सबै फेसबुक प्रयोगकर्ताले ‘लाइक’ लाई ‘मन पर्नु, मन परेको’ भनेर बुझ्ने गरेकाछन् ! अनि हामीले पहिले देखि पढ्दै आएको कुरा पनि त्यही नै हो, ‘केही कुरा मन पर्नु’लाई ‘लाइक’ भनिन्छ, वा ‘उस्तै उस्तै कुरालाई’ पनि यदाकदा